Sijabulela kakhulu ukuvakasha, kangangokuthi sizizwa sinentshiseko yokwamukela abahambi abavela kuwo wonke umhlaba. Amakhabethe ethu asezintabeni zase-SW Mexico City, isimo sezulu siyabanda njengoba siseduze nehlathi. Sihlose ukwenza uzizwe ukhululekile futhi ukhululekile!
I-Tlazala Bed & Breakfast Campirano
Siwumndeni osekuphele iminyaka engaphezu kuka-40 unale ndawo. Sikulangazelela kakhulu ukwamukela abantu abavela kuwo wonke umhlaba futhi sikwenze uzizwe usekhaya. Indawo yethu yamazwe ngamazwe isivumela ukuthi sikhulume ngezilimi ezahlukene njenge: IsiNgisi, iSpanishi, isiJalimane, isiSwedish, isiPutukezi nesiFulentshi. Sijwayele ukwamukela abantu abavela emhlabeni wonke!
I-Tlazala B&B itholakala kalula kumakhilomitha angama-30 ngaphandle kweDolobha laseMexico, emithambekeni ye-Cruces Mountain Chain. Iseduze nenkaba ye-Tlazala, idolobha elikhulu likaMasipala wase-Isidro Fabela. Sizungezwe amahlathi amahle athokomele kanye nezihlahla zikaphayini nama-oki. Umbono wethu uwukwenza i-B&B ibe yithuba labantu abavakashela e-Mexico abafuna ukuchitha izinsuku ezithile bengekho enhlokodolobha. Uzojabulela isibonelo esihle sohlangothi lwezwe laseMexico futhi ube nethuba lokuhlola ezinye izindawo ezaziwa ngabantu abambalwa bedolobha.
Siyaqiniseka ukuthi uzoba nesikhathi esinokuthula ngesikhathi sokuhlala kwakho futhi ukwazi ukuthola ubuthongo obuhle ebusuku, nakuba ungase uphaphame ngokucula kwezinye izinyoni noma ukubuka ukuphuma kwelanga!
Kunezinketho ezinhlanu eziyinhloko ongakhetha kuzo lapho uzohlala khona, kusukela ekukhempini kuya endaweni yokulala, noma kusukela ekamelweni elilula elixhuma indawo yokushisa, ukuya endlini entsha yamapulangwe. Zonke izinketho zinezindlu zangasese kanye neshawa. Sihlinzeka ngoxhumano lwe-inthanethi lwamahhala kuwo wonke amakhabethe nakwezinye izindawo zasengadini, ukuze uhlale uxhumekile futhi wabelane ngemicabango yakho nezithombe zendawo nezihlobo zakho nabangane. Uma udinga ukudla singakuhlelela ke. Ozakwethu bokupheka banganikeza ezinye izindlela eziningi, okuhlanganisa nezinketho zemifino. Ngezindleko ezengeziwe sikunikeza indawo ye-grill noma i-temazcal (i-sauna yendabuko) kanye nendawo ye-jacuzzi oyoyijabulela nakanjani!
Kukhona izinto eziningi ezikhangayo nezinto ongazenza ngenkathi uhlala e-Tlazala B&B Campirano. Singakuhlelela ukuvakasha ukuze uqwale emahlathini amahle asendaweni, useshe ulwazi lwethu lwe-"Gran caminata", noma uvakashele amapulazi ambalwa okukhiqiza ezolimo nabangane bethu abaseduze (ngesizini yezitshalo). Ungakwazi futhi ukuhlola uwedwa ngokuvakashela i-Otomi Ceremonial Center, ukuthenga okhaphethi e-Temoaya, ukunambitha ama-trout amnandi eduze kwedamu lase-Iturbide, nokunye okuningi!
Izinketho zokuhamba ezimbalwa zingakuyisa lapha, futhi zisuka e-El Toreo, Tlalnepantla noma e-Atizapán. Ngokuqondile noma ngokuma e-Villa Nicolás Romero noma e-Santa Ana Jilotzingo, uhambo akumele likuthathe ngaphezu kwamahora angu-1.5. Nokho, uma ufika esikhumulweni sezindiza samazwe ngamazwe saseMexico City, singakwazi ukuhlela ukuzokuthatha lapho noma kwenye indawo.
Isikhathi esingcono kakhulu sokuchitha izinsuku zokuphumula ku-B&B ngezimpelasonto, kodwa sivulekele ukukwamukela noma nini!
Idamu le-Iturbide (inkathi yokudoba ivuliwe kusukela ngo-Ephreli kuya kuJuni), i-Centro Ceremonial Otomí, uhambo lwamahlathi.
Sivamise ukukuphakela isidlo sasekuseni ekhabetheni lakho. Uma kungenzeka, sizama nokuhlanganyela okunye ukudla ndawonye.